Kenyà18 Janoary 2008
Ejipta12 Janoary 2008
Efa fantatrao ny toekarenan’ny Repoblika Entim-bahoakan’ny Shina, iray amin’ny toekarena mivelatra indrindra eto ambonin’ny tany. Tsy atao mahagaga ny fahitana entana Shinoa eny an-tsena eto Ejipta noho ny fitomboan-karena Shinoa mihoatra ny 10 isanjato isantaona. Ny tena mahaliana dia ny fiankinan’ny fivarotana entan-tshinoa ivelan’ny trano fivarotany. Tsikaritry ny rehetra fa...
Tselatra · Letonia12 Janoary 2008
Dôminika, Venezoelà : Raikitra ve ny varotra ?
Apparently Hugo Chavez announced today that construction will begin soon on the oil refinery here “Toa hoe nambaran'ny (filoham-pirenena Venezoelana) Hugo Chavez androany fa hanomboka aty tsy ho ela (intony) ny fanorenana ny orinasa vaventy fanodinana solika ho lasantsy” Manontany tena i Living Dominica raha misy zavatra tsy arany [tsy nanao...
Taiwan: Ny vidin’ny anana
Taiwan (ROC)11 Janoary 2008
Nihena hatramin’ny atsasa-bidiny ny vidin’ny anana any Taiwan hatramin’ny nisokafan’ny tsenan’ny tantsaha. Hoy ny filazan’i PipperL mitantara ny fidinam-bidin’entana mampahory ny tantsaha any (zh)